नर्थ अमेरिका स्पेसल « Light Nepal
नर्थ अमेरिका स्पेसल
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मुख्यालय रहेको टावरमा आगलागी
एजेन्सी । अमेरिकाको न्यूयोर्कमा रहेको ट्रम्प टावरमा आगलागी भएको छ । टावरको ५० औं तल्लामा आगो लाग्दा एकजना व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । उक्त तल्लामा रहदै आएका एक व्यक्तिको अस्पतालमा
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका विषयमा आयो यस्तो झुटो खबर
काठमाडौं, १७ फागुन । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको नाम नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि प्रस्ताव गरिएको खबर झुटो हुन सक्छ । नोबेल पुरस्कार समितिले यस विषयमा चिन्ता समेत प्रकट गरेको छ
अमेरिकामा घट्दैछ डोनाल्ड ट्रम्पको ‘क्रेज’
वासिङटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको समर्थनमा लगातार गिरावट आएको छ । एक समाचार च्यानलको सर्भेमा उनलाई हालसम्मकै कम रेटिङ मिलेको छ । यस पटक उनलाई केबल ३५ प्रतिशत समर्थन
अमेरिका, २७ मंसिर । नया बर्ष २०१८ को लागि नेपाल आइडलका विजयीहरू बुद्ध लामा, निशान भट्टराई र प्रताप दास अमेरिकाको प्रत्यक्ष सांगीतिक यात्रा कार्यक्रम को लागि अमेरिका आउने भएका छन्
वासिङ्टन डिसी, १५ भदौ । चितवन घर भएका रवि कोइराला अमेरिकाको न्युयोर्कमा बस्न थालेको करिब १३ वर्ष भयो । यो समयमा उहाँले कति रकम आम्दानी गर्नुभयो कुनै लेखाजोखा छैन ।
अष्टिन (टेक्सास), २२ असार । गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएन अमेरीकाको निर्बाचन कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । बन्दिता शर्मा दाहाल संयोजक रहेको निर्वाचन समितीले मंगलवार निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो
अन्नतः अमेरिकाले पनि पहिलो नेपाली पुस्तकालय पायो
नेपाली भाषी भूटानी युवा समाजसेवी, पत्रकार, तथा साहित्यकार राकेश काफ्लेको अभियानलार्इ पूर्णता दिदै भूटानी ढुकढुकी पुस्तकालय अमेरिकाको आइअोवा राज्यको सुन्दरनगरी डिमोएनमा स्थलगत र अन्लाइनमा गरी हजाराैंको संख्यामा उपस्थित रहेका नेपाली
वासिङ्टन डिसी, १४ चैत । नेपालीको बाहुल्यता भएको मेरिल्यान्ड राज्यमा नेपाली संस्कृति झल्कने हिन्दू बौद्ध मन्दिर निर्माणका लागि छ लाख ८० डलरमा जग्गा तथा भवन खरिद गरिएका छन् । बैंकको
अमेरिकाको वासिङ्टन राज्य सरकारले नेपाली विषयलाई अध्यापन हुने भाषाका रुपमा सूचीकृत गर्यो
काठमाडौँ, १६ फागुन । संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन राज्य सरकारले नेपाली विषयलाई अध्यापन हुने भाषाका रुपमा सूचीकृत गरेसँगै नेपाली विषय अध्ययनको ढोका खुलेको छ । वासिङ्टन राज्यको एसिया प्रशान्त मामिला
देश- विदेश भरि किन गर्दछन युवा युवतीले आत्मा हत्या ? कसरि आफ्नो मन् बलियो बनाउन सकिन्छ त ? नेपाली युवाले क्यानेडामा चलाएको अभियान हेर्नुहोस् भिडियो
शिक्षक भर्नामा मनोमानी गरेको विद्यालयलाई अख्तियारको
मैनाबगरमा अब मदिरा पिउन नपाईने
हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भएकाका परिवारले पाउने
पांचहजार लोकगीत गाएकी गायीका बिमाकुमारी दुरा
सरकारविरुद्ध विपक्षी काँग्रेसले गर्यो देशब्यापी सडक